I-San yizakhamuzi ezindala kakhulu ze-Afrika eseNingizimu, lapho zihlala okungenani iminyaka engu-20 000. I-San ithole ukunakekelwa kwe-anthropologists kanye nabezindaba ngamakhono abo okusinda nokuzingela, ingcebo yolwazi lwendabuko lwezitshalo nezilwane ze-Afrika yaseningizimu, kanye namasiko abo amasiko.
Inkolelo eyayisakazeke iminyaka eminingi yilapho iSan eKalahari Desert yaseBotswana neNamibia kwakuyizinzukulwana zabantu ababalekile abaxoshwa ezindaweni ezingcono kakhulu eziseNingizimu Afrika. Eqinisweni, ubufakazi bokuvubukulwa kwembula ukuthi iKalahari iye yahlala abazingeli-abaqoqi bezinkulungwane zeminyaka.
Lezi zizwe ziye zafundiswa kabanzi yi-anthropologists kanye nabavubukuli, befuna ukufanisana phakathi kwabazingeli abaqoqayo nabahlakho babo. Kodwa iSan ayikho 'imfuyo yezinto eziphilayo': njengabanye abantu abaguquka ngezimo. Abazingeli abaqoqayo baseKalahari banamanje izici eziningi zendlela yokuphila yasendulo, kodwa abangekho ezweni lanamuhla kanye nomnotho wezimali.
Kunezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zezinkolelo phakathi ngisho nangaphakathi kwamaqembu ahlukene e-San, kodwa kunezinto eziningi ezifanayo...more
Imidwebo Yomgede yamaSan
Imidwebo emangalisayo eyenziwa okhokho baseSan emadwaleni nasezindongeni zomhume nomkhombandlela kuthiwa yiyona enhle kakhulu futhi enembile kakhulu embonini yomzingeli wezokuzingela emhlabeni....more
Ngezikhathi ezahlukene nezindawo, ama-San-izikhulumi aphile ngezindlela ezehlukene; I-Kalahari San ayidingekile ejwayelekile yeSan futhi, ngisho nakumaqembu e-Kalahari, indlela yokuphila ingahluka....more
Ama-San aseNingizimu Afrika
Izinduna zeSan-izikhulumi kungenzeka ukuthi zaziyizakhamuzi zokuqala zakwa-Afrika eseningizimu, nezindawo zokuvubukula ezivela emakhulwini ezinkulungwane zeminyaka....more